Daawo Sawirada Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ban-Ki-Moon oo kulmay. - jornalizem
Daawo Sawirada Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ban-Ki-Moon oo kulmay.
Madaxweynaha J.F.S. Mudane Hassan Shekh Mohamoud ayaa xafiiskiisa kula kumay Xoghayaha Guud ee Qaramada Midowbey, Ban-Ki-Moon. Isagoo kala hadlay sidii loo kobcin lahaa wada shaqeynta iyo iskaashiga labada dhinac.
Ban-Ki-Moon wuxuu hadalkiisa ku billaabay ammaan uu u soo jeediyey M/weynaha Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Maxamuud hoggaanka iyo maamulka wanaagsan ee uu-wado. Wuxuu kale ee Ban-Ki-Moon sheegay in Qaramada Midowbey ay mar walba diyaar u tahay iney taageerto dowladda uu u hoggaanka u haayo M/weyne Hassan Sh.
Mudane Hassan Shekh Mohamoud oo isagana markiisa hadalka qaatay, wuxuu uga mahad celiyey Ban-Ki-Moon si loogu soo dhaweeyey xarunta weyn ee Qaramada Midowbey.
Wuxuu M/weyne Hassan Sheikh uga warbixiyey guulihii ay dowladda Somaliyeed ay gaartay tan iyo markii uu hoggaanka qabtay. Wuxuu kale oo M/weynaha ka hadlay waxna ka ta-taabtay arrimaha la xiriira nabad gelyada, siyaasadda, xuquuqul Insaanka, shirkii Brussels iyo guud ahaan warbxin dhinac walba taabaneysa ee Soomaaliya.
Wuxuu ka codsaday Ban-Ki-Moon in taageero buuxda la siiyo Ciidamada Xoogga Dalka Somaliyeed si ay uga hortagaan khatarta ay wadaan Al-Shabaab.
Wxuu M/weyne Hassan Sheikh Moxamoud uga tacsiyadeeyay M/weynaha Kenya Uhuru iyo dhammaan shacbiga Kenya dhibaatadii dhawaan ka soo gaartay West Gate oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac.
Ugu dambeyntii wuxuu M/weyne Hassan Sheikh ka codsaday Ban-Ki-Moon in shaqaalaha Qaramada Midoobey ee arrimaha Soomaaliya ay u soo guuraan caasimadda Xamar